Dadweyne Cabasho ka Muujiyey Dal-ku-galka Itoobiya oo Hakad galay iyo Safaaradda ay Somaliland ku leedahay oo Shaacisay xilliga ay bilaabayso bixinta Fiisahooda | Saxil News Network
Dadweyne Cabasho ka Muujiyey Dal-ku-galka Itoobiya oo Hakad galay iyo Safaaradda ay Somaliland ku leedahay oo Shaacisay xilliga ay bilaabayso bixinta Fiisahooda
Hargeysa (SAXILNEWS)_Dadweynaha reer Somaliland ee doonaya inay u safraan dalka Itoobiya, ayaa ku cawday inay dhibaato xoog leh ku qabaan Safaaradda Itoobiya ku leedahay magaalada Hargeysa, ka dib markii ay sheegeen in bishan u dambaysay-ba ay la’aayeen Fiisaha dal-ku-galka Ethiopia. Hase-yeeshee, Masuuliyiinta Safaaradda, ayaa Himilo u sheegay inay dhawaan bilaabayaan bixinta Fiisayaashooda.
Xafiiska Safaaraddu ku leedahay dhinaca Bari ee Wasaaradda Maaliyadda Somaliland ee magaalada Hargeysa, waxa inta badan maalmaha shaqada gelinka hore hor tuban dad u badan Dumar iyo dhallinyaro doonaya inay u safraan dalka Itoobiya, kuwaasoo qaarkood ay sheegeen in Baasaabboorka loo fiiseeyo sugayeen muddo 24 Maalmood ah, sida ay Wargeyska Himilo u sheegeen Xubno ka tirsan Sugayaasha Fiisaha Itoobiya oo xarunta Safaaradda hor-tubnaa Isniintii dorraad.
Hase-yeeshee, dadweynaha oo aan ku kalsoonayn Warka ay Safaaradda ka heleen oo ahaa in Fiisayaashu weli ka go’an yihiin, ayaa Isniintii ku yaacay, isla markaana isku gedaamay Taliyaha Laanta Socdaalka Somaliland Gaashaanle Maxamed Cali Yuusuf (Ina-Cambaro) oo xilli dadweyne fara badan hor-tubnaayeen Safaaradda Itoobiya lug ku soo maray Jidka hor-mara Xafiiskaas.
Dadweynaha, ayaa qaarkood Taliyaha Laanta socdaalka Somaliland u bandhigeen dhibaatada iyo habsanka ay ku qabaan Safaaradda Itoobiya ee Hargeysa, hasa-yeeshee Taliyuhu wuxuu dadweynaha intii la hadashay ka dalbaday inay Xafiiskiisa ugu yimaaddaan ama ugu tagaan.
Haddaba, Wargeyska Himilo oo u kuur-galaya caqabadaha sababay cabashadan ka taagan Fiisayaasha dal-ku-galka Itoobiya ee dadweynaha reer Somaliland cabashada ka muujiyeen, waxaanannu la xidhiidhnay Masuuliyiinta Safaaradda Itoobiya ku leedahay Somaliland ee magaalada Hargeysa, waxaanay ku doodeen inay dhawaan bilaabayaan bixinta dal-ku-galkooda la saarayo Baasaabboorka Somaliland.
Masuulka Xafiiska Fiisayaasha u qaabbilsan Safaaradda Itoobiya ee Hargeysa Mr. Khaliil Ismaaciil oo xalay u warramay Wargeyska Himilo, ayaa shaaca ka qaaday inay maalmaha soo socda iman doonaan Waraaqahii Fiisayaashu.
Khaliil oo ka jawaabayey Su’aal Weriye ka tirsan Himilo weydiiyey caqabadda jirta, waxa uu ku jawaabay; “Insha Allaah maalmaha soo socda way na soo gaadhsiin doonaan Masuuliyiinta ay khusayso Fiisayaashii dal-ku-galka Itoobiya. Markaa, dhammaan Muwaaddiniinta Somaliland ee buuxiya Shuruudaha lagu bixiyo way heli doonaan Fiisayaasha, isla markaana cid si gaar ah looga hor-istaagi doonaa ma jiri doonto.”